Steve Zahn – Cast – Channel Myanmar
IMDB: 5.6/10 43,513 votes
The Good Dinosaur Thit San Khant 2015 လောက်က CM မှာ တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ The Good Dinosaur ဆိုတဲ့ Animation ရုပ်ရှင်ကားလေးကို အသစ်တဖန် 1080P BluRay Version အဖြစ်ပြောင်းလဲ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြည်တောက်ရှင်းမှ ကြိုက်တဲ့ Quality အကောင်းကြိုက်သူတွေ အတွက်ပါ.... ဒီ Animation ရုပ်ရှင်လေးဟာ ကလေးတွေတင် မကပါဘူး လူကြီးတွေပါ ကြိုက်ပါတယ်... ကျနော်တို့ မသိလိုက်တဲ့ ကျောက်ခေတ် မှာ ဒိုင်နိုဆော တွေဟာ သူတို့ဘာသာ အသက်ရှင် ရပ်တည်ဖို့ အသီးအရွက်စားတွေ ဆို လယ်တွေ စိုက်တယ် ရိတ်သိမ်းတယ် လှောင်ထားတယ် နွေစာ မိုးစာ ဆောင်းစာ သက်သက်မှတ်မှတ် သိမ်းကြပြီး အသားစား သတ္တ၀ါတွေကတော့ အသားစားလို့ရတဲ့ သတ္တ၀ါငယ်တွေကို မွေးမြူပြီး စားသောက်ကြပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ လူသားတွေ ဆိုတာ ဒိုင်နိုဆော လောက်တောင် အသိဥာဏ် မဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ ပုံစံ ပြသထားပြီး ဒီရုပ်ရှင်ကား ရဲ့ အဓိက ဇတ်ကောင် ၂ ခုဖြစ်တဲ့ အာလို ဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆော ငကြောက်လေး ရယ် သူ့ကို အမြဲ လိုက်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ စပေါ့ ဆိုတဲ့ လူသားပေါက်စ လေးရယ် က ဇတ်လမ်းကို အဆုံးထိ ထိုင်ရာက ...
IMDB: 6.7/10 87,119 votes
Lean on Pete (2017) [Unicode] Lean on Pete ဇာတျကားကတော့ စာရေးဆရာ Willy Vlautinရေးသားခဲ့တဲ့ lean on Pete ဝတ်ထုကို အခွခေံပွီး Director - Andrew Haigh က ပွနျလညျ ရိုကျကူးထားသော ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကတော့ ဆယျကြျောသကျကောငျးလေးတဈယောကျရဲ့ သူ့ပွိုငျမွငျးအပျေါ သံယောဇဉျကွီးပုံကို အဓိကဖျောပွထားတဲ့ ဇာတျကားတဈကားဖွဈပါတယျ။ မွငျးပွိုငျပှဲတဈခုက ၁၅နှဈအရှယျကောငျလေးတဈယောကျရဲ့ အိုမငျးနပွေီဖွဈတဲ့ပွိုငျမွငျး lean on peteကို သားသတျသမားတှကေ နှိပျဆကျပွီးတဈခွားနရောကို ပို့တော့မယျဆိုတာ သိလိုကျရခြိနျမှာ... သူ့အခဈြတျောမွငျးကို ကယျဖို့သူဘာတှဆေကျလုပျမလဲ... ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈသှားမလဲ... စိတျလှုပျရှားစရာအပွညျနဲ့ ရငျသကျရှူ့မောဖှယျခံစားရမယျ့ Adventure ,Drama ရုပျရှငျဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။ [Zawgyi] Lean on Pete ဇာတ်ကားကတော့ စာရေးဆရာ Willy Vlautinရေးသားခဲ့တဲ့ lean on Pete ၀တ္ထုကို အခြေခံပြီး Director - Andrew Haigh က ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ သူ့ပြိုင်မြင်းအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးပုံကို အဓိကဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုက ၁၅နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ပြိုင်မြင်း lean on peteကို သားသတ်သမားတွေက နှိပ်ဆက်ပြီးတစ်ခြားနေရာကို ပို့တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရချိန်မှာ... သူ့အချစ်တော်မြင်းကို ကယ်ဖို့သူဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ... ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ... စိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည်နဲ့ ရင်သက်ရှူ့မောဖွယ်ခံစားရမယ့် Adventure ,Drama ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ File size…(999MB) ...
Chicken Little ကဲ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ၂၀၀၅ လောက်က Animation Cartoon ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chicken Little ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... CK Little လေးဟာ အမြဲတမ်း အကောင်သေးသေးလေးဖြစ်နေပြီး ဘယ်နေရာမှ လူဝင်မဆန့်ပါဘူး လူတိုင်းကလဲ သူနဲ့ မပေါင်းချင်သလို အကောင်ကြီးတွေကလဲ အမြဲပဲ သူ့ကို လိုက်စနေပါတယ် အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလဲ တစ်ခါက မြိုကထဲက အရေးပေါ်ခေါင်းလောင်းကိုတီးပြီး ဂြိုလ်သားယဉ်ပျံရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ အတွက်ပါ အဲ့ဒီတုန်းက မြို့နေ လူအားလုံးဟာ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး CK Little ကိုလဲ ကျပ်မပြည့်တဲ့ ကြက်လေး လို့ မှတ်ယူလိုက်ကြပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ CK Little တို့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုဟာ တကယ့် ဂြိုလ်သားယဉ် လာတာကို ရှာတွေ့သွားတဲ့ အခါမှာတော့..... ဒီကာတွန်းကားကို သီချင်းတွေ က အစ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ May Thazin Soe ဖြစ်ပြီး Thit San Khant မှ Encode ပေးထားပါတယ် Download Now =============== BluRay Clear Version (1080P) (750MB) SD Size (480P) (350 ...
IMDB: 5.8/10 73,343 votes
Diary ofaWimpy Kid: Dog Days (2012) It's summertime, and Greg Heffley is looking forward to playing video games and spending time with his friends. However, Greg's dad has other plans: He's decided that some father-son bonding time is in order. Desperate to prevent his dad from ruining summer vacation, Greg pretends he hasajob ataritzy country club. But Greg's plan backfires, leaving him ...
IMDB: 6.3/10 20,902 votes
Diary ofaWimpy Kid: Rodrick Rules (2011) Wimpy Greg Heffley, now in seventh grade, thinks he has it all together. He has mastered middle school and gotten rid of the Cheese Touch. However, Greg's older brother, Rodrick, is itching to cut him down to size. He gets the perfect opportunity when their mother tries to force the boys to bond. Rodrick may be Greg's chief tormentor, but ...
IMDB: 6.5/10 24766 votes
Diary ofaWimpy Kid (2010) Greg Heffley is headed for big things, but first he has to survive the scariest, most humiliating experience of any kid’s life – middle school! That won’t be easy, considering he’s surrounded by hairy-freckled morons, wedgie-loving bullies andamoldy slice of cheese with nuclear cooties! ဒီဇာတျကားလေးဟာ Jeff Kinney ရဲ့ စာအုပျတှထေဲကတဈတှဲဖွဈပွီး Imdb 6.2 ထိရရှိထားတဲ့ မိသားစုကွညျ့ဇာတျမွူးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ ဇာတျကားအညှနျးပွောရရငျ Greg ဆိုတဲ့ကြောငျးသားလေးတဈယောကျအလယျတနျးတကျစရတဲ့အခြိနျမှာ သူ့ကိုဘယျသူမှမချေါပွောကွတဲ့အဖွဈဆိုးတှနေဲ့ကွုံခဲ့ရပါတယျ။ သူဒီအဖွဈဆိုးတှကေရှောငျဖို့အတနျးရဲ့အခဈြတျောစာရငျးထဲဝငျအောငျ ကွိုးစားရပါတော့တယျ သူဘယျလိုကွိုးစားလဲ ဘာတှဆေကျဖွဈလဲဆိုတာရုပျရှငျကိုသာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုကွပါလို့ပွောခငျြပါတယျ (ဘာသာပွနျသူနဲ့ အညှနျးရေးသူကတော့ "သရဲကားတှပေဲရေးလရှေိ့တဲ့ Moe Oo ...
IMDB: 6.2/10 40923 votes
War for the Planet of the Apes (2017) အမေရိ ကန်စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့ War for the Planet of the Apes ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးအ ကြောင်း ပြောပြပါရစေ။ ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးသမားတွေရဲ့ ချီးကျူး တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရထားတဲ့ ဒါရိုက်တာမက်ရိဗ်စ်ရဲ့လက်ရာ ဇာတ်ကားလေးကို ၂၀ ရာစုမြေ ခွေးရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေးကနေ ဖြန့်ချိထားတာပါ။ ဒီတစ်ခါ ဇာတ်လမ်းကတော့ နာမည်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စစ်ပွဲလို့ သုံးထားတဲ့အတွက် လူသားတစ် ယောက်လို အိုင်ကျူမြင့်တဲ့ ချင် ပန်ဇီမျောက်ဝံဆီဇာခေါင်းဆောင် တဲ့ မျောက်ဝံတပ်သား အဖွဲ့နဲ့ မျောက်ဝံတွေကို သုတ်သင်ဖြိုခွဲ မယ့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲကိုအဓိကဇာတ်အိမ်တည် ထားတာပါ။ မျောက်ဝံစစ်တပ်ကို ဖြိုခွင်း ဖို့အတွက် အယ်လ်ဖာ-အိုမီဂါလို့ ခေါ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို အကြင်နာမဲ့ရက်စက်တဲ့ ကာနယ် ကဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီး ဆီဇာရဲ့ ဇနီးနဲ့ သားအကြီးဆုံးကို သတ် ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မိသား ...
IMDB: 7.8/10 75,553 votes
Sahara Scouring the ocean depths for treasure-laden shipwrecks is business as usual forathrill-seeking underwater adventurer and his wisecracking buddy. But when these two cross paths withabeautiful doctor, they find themselves on the ultimate treasure hunt. ၁၈၆၅ အမေရီကန် ပြည်တွင်းစစ် အတွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ရံပုံငွေအဖြစ် ရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေကို သွန်းလုပ်ခဲ့တယ် ။ စစ်ပွဲအခြေနေ မဟန်တော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေကို သံချပ်ကာသင်္ဘောအပြည့်တင်ပြီး အရှေ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကနေ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကို ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ် ။ သူတို့ရည်ရွယ်တာကတော့ အဲဒိအချိန်က အာဖရိကရဲ့ အစည်ကားဆုံး နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ နိုက်ဂျားမြစ်ဘေးက ...
IMDB: 6.0/10 80,705 votes